Wararka - Runtii ma taqaanaa boodh sameeyaha baabuurta wax ku shaqeeya
1.Waa maxay Polishka Gawaarida Waxqabadka Labaad?
Nalal-falanqeeye laba-fal ah ayaa lagu gartaa dhaqdhaqaaqa madaxa. Waxay ku wareegsan tahay dunmiiqa dhexe, dunmiiqaaguna wuxuu ku wareegaa wareegga eccentric. Sarbeeb wanaagsan oo loogu talagalay gole laba-geesood ah waa wareegga dhulka. Dhulka laftiisa ayaa wareega oo sidoo kale wuxuu ku wareegaa qorraxda. Polishka wax qabad ee laba-geesood ah ayaa nadiifiya, nadiifiya, oo ku sameeya dhaqdhaqaaq la mid ah kan gacanta-kaliya ee xawaaraha aadamiga weyn! Natiijadu waa mashiin gebi ahaanba xasilloon, oo aan u janjeerin inuu "ka cararo" hawlwadeenka. Tallaabada siman ee gacanta oo kale ah ayaa ka ilaalinaysa waxyeellada dusha sare.
2.Waa maxay sababta loo doorto Polishers Gawaarida Waxqabadka ah?
Mashiinka waxqabadka labada-tallaabo ah ayaa hagaajin doona muuqaalka iyo dhalaalka rinjiga baabuurta iyadoo aan wax khatar ah lahayn. Iyagu waa xulashada ugu saaxiibtinimada badan bilowga iyo xirfadleyda, waxayna si isdaba joog ah u soo saaraan natiijooyin qurux badan. Waxay kuu keeni karaan madadaalo markaad faahfaahinayso, waxayna kaa caawinayaan inaad waqti iyo lacagba u baajiso. D / A Polisher waa mashiin isku dhafan. Waxaa loo isticmaali karaa nadiifinta, nadiifinta, iyo marinka waxes, dhamaadka ugu dambeeya xawaare ka duwan.
3.Sidee ayey u shaqeysaa Polishers Gawaarida Waxqabadka ah?
Wax-ka-sameeyaha wax-qabadka ee 'Dual Action Polisher' wuxuu ku meerayaa suufka dunmiiqa agagaarkiisa halka suufku uu si xor ah ugu wareego dhidibkiisa.
Miisaanka miisaanka culus ee dhinaca ka soo horjeedka dhexe ee dunmiiqa ayaa qoyaya gariirka hawlgalka fudud. Tallaabada madaxa mashiinka ee loo yaqaan orbital waxay ka hortageysaa abuurista hologram (calaamadaha isdabamarinta calaamadaha), gubashada ranjiga, iyo noocyada kale ee waxyeellada rinjiga inta badan lala xiriirinayo qalabka wax lagu beddelo ee xawaaraha sare leh iyo mashiinnada lagu keydiyo. Polishka wax qabad ee laba-geesoodka ah wuxuu baabi'inayaa suurtagalnimada waxyeellada ranjiga. Waxay aad saaxiibtinimo ugu yihiin isticmaalayaasha.